FENITRA RSPO : Nampahafantarina ireo mpamboly ao Toamasina II ny alarobia 8 mey teo
Efa nanomboka ny taona 2013 no niara-niasa tamin’ny sampan’ny fenitra “RSPO” amin’ny vokatra azo amin’ny “Palmier” aty Afrika ny Faritra Atsinanana sy ny orinasa “Huilerie de Melvile” ao Fanandrana. Mila an’io fenitra io amin’ireo vokatra vidîny eo amin’ny tsena iraisam-pirenena ireo mpividy, indrindra ny any Eropa. 15 mai 2019
Tonga tao Toamasina, ny alarobia 8 mey teo ny talen’izany aty Afrika, Elikplim Dziwornu sy Victor Yuk Tamanjong. Fotoana nampahafantarina izany tamin’ireo tantsaha tao Toamasina II miroso amin’ny fambolena hazo “Palmier”.
Tena ilaina sy tena ampiasain’ireo orinasa mpanodina sakafo ary fampiasan’ny olona an-trano ny vokatra azo avy amin’ny “Palmier” ankehitriny. Vokany, lasa mitondra olana amin’ireo firenena mpamokatra ny fanajana ny maholona sy ny tontolo iainana ary ny lalàna. Izay no nahatonga ny vondrona Eropeana nametraka ny fenitra ‘RSPO” ho fanajana ireo fepetra valo tsy maintsy arahina amin’ireo firenena mpamokatra sy mpanondrana vokatra azo avy amin’ny “Palmier” maneran-tany. Mbola misy ny fandeferana izao, saingy tena ho hentitra ireo firenena mpikambana ao Eropa manomboka amin’ny taona 2020 amin’ny fenitra “RSPO”, indrindra eo amin’ny fenitra ara-boajanahary sy ny tontolo iainana ary ny fanajana ny mpiasa.
« Efa telo taona no niandrasanay izao fotoana izao, ankoatra ireo fepetra maro tsy maintsy arahina, dia tombontsoa betsaka ho anay izany », hoy ireo fikambanana roa misy ao Fanandrana sy Ambotitandroroho Toamasina II, izay natao filamatra mikasika ny fambolena “Palmier” sy vokatra azo avy aminy. Ho an’ny Faritra Atsinanana koa dia mitondra tombony ho an’ny tantsaha ny fananana ny fenitra “RSPO” ity. Lasa fantatr’izao tontolo izao izy ireo ary miteraka fidiram-bola maharitra ho lovain-jafy. Efa tontosan’ireo tantsaha avokoa ny ankamaroan’ny fepetra napetraky ny vondrona “RSPO”, saingy misy kely mbola ahitsy fotsiny dia ho tratra ny fenitra napetraka ary hahazo izany ireo tantsaha ao Toamasina II ireo.
Ho an’ny orinasa “Huilerie de Melvile”, ny taona 2015 no efa nahazo ny fenitra “RSPO 110.633” izy ireo ka afaka miditra amin’izay eo anivon’ny tsena Eropeana sy tsena iraisam-pirenena. Isaky ny dimy taona no manao ny tombana amin’ny fanarahana ny fenitra io ny sampana aty Afrika ho fampanajana ireo fepetra valo napetraky ny tsena iraisam-pirenena momba ny vokatra azo amin’ny “Palmier”. Tsy izay ihany anefa no fenitra efa azon’ity orinasa ity, fa teo koa ny “Agri-Bio MGBio 154” sy ny “Bio Suisse Organic”. Ho an’izy ireo dia efa 18 volana no niandry izao fanaraha-mason’ny sampan’ny “RSPO” aty Afrika ny orinasa, ho fanamafisana ny fenitra efa azony ho fidirana misimisy kokoa amin’ny tsena Eropeana.
Ankoatra izany dia efa ny taona 2004 no natsangana ny fenitra “RSPO”, araka ny fanapahan’ny vondrona Eropeana sy ny sehatry ny varotra iraisam-pirenena momba ny menaka. Nanomboka io taona 2004 io mantsy dia tsy nitsahatra niakatra ny filan’ny mpanjifa ny vokatra izay mahatratra 70 tapitrisa taonina isan-taona izany nanomboka roa taona lasa izao. Ny antony dia mora ambolena sy hahazoana vokatra betsaka ny hazo “Palmier” noho ireo vokatra hafa fakana menaka.